Naya Bikalpa | यो कानुन आएपछि झन् घरकीलाई नहेर्ने बाहिर केटी राखेर पुरै ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्ने समस्या एकदमै बढेको छ - Naya Bikalpa यो कानुन आएपछि झन् घरकीलाई नहेर्ने बाहिर केटी राखेर पुरै ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्ने समस्या एकदमै बढेको छ - Naya Bikalpa
यो कानुन आएपछि झन् घरकीलाई नहेर्ने बाहिर केटी राखेर पुरै ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्ने समस्या एकदमै बढेको छ
प्रकाशित मिती: २०७७ कार्तिक ४, १२: ००: २०
चाडपर्वसँगै कोरोनाले सताएको छ, फलेवास नगरपालिकामा त्यो समस्या कत्तिको छ ?
यहाँ पनि नहुने कुरै भएन् । तर, शहरबजार जस्तो प्रभाव त छैन । छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउने व्यक्तिबाट फैलिने डर छ ।
त्यसरी बाहिरबाट आउनेलाई पहिला स्वाव टेष्ट गर्ने र पोजेटिभ आउनेलाई आइसुलेसनमा राख्ने र नेगेटिभ आउनेलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाउने व्यवस्था सबै नगरपालिका, गाउँपालिकाले गर्ने गरेका छौं ।
विदेशबाट आउनेसँग डर भयो, अहिले काठमाडौंबाट गाउँ जानेबाट पनि फैलिने डर छैन ?
दशैंजस्तो महत्वपूर्ण चाडमा घर नआउनुहोस् भनेर सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यो भन्दा पहिला हामीले केही व्यवस्था गरेका थियौं । अहिले चाहीं परिस्थितिको संवेदनशीलता ध्यान दिएर आफै जोगिनुप¥यो । त्यसको होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुप¥यो ।
गाउँघर सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ट्वाइलेटको छ । बस्ने कोठा त बरु मिल्छ, गाउँमा त धन्सारहरु हुन्छन् । खानाको पनि अस्पतालमा भन्दा घरमै राम्रो व्यवस्था हुन्छ । त्यसकारण घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् बरु ट्वाइलेट व्यवस्थापनको लागि सहयोग गछौं भनेर नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
नगरपालिकाको बजेटले विकास निर्माणका काम र कोभिड नियन्त्रणमा कसरी समायोजन गर्नुभएको छ ?
कोभिडको हाम्रो मात्रै नभएर विश्वभरिकै समस्या भयो । त्यो समस्याबाट हाम्रो नगरपालिका पनि अछुतो रहेन । विकास निर्माणका काम गर्न चाहीं पहिला कामदारहरुलाई यहाँ नराख्ने गाउँ पठाउने भनेर पठाइयो । पछि समस्याले लामो रुप लिएरपछि तिनै कामदारहरुलाई फर्काएर ल्याउँदा कोभिड फैलिने खतरा सह्यो । त्यसले गर्दा भौतिक पूर्वाधारका काम धेरै डिस्ट्रब भएको छ ।
कोभिडको समस्या सरकारको अदूरदर्शीताका कारणले पछिल्लो समय बढी झांगियो भन्ने छ यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?
होइन, सरकारले त एकदमै कन्ट्रोल गरेको हो । यो फेरि बाजा बजाएर आउने होइन । अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि एक्कासी आएको हो । अन्य विकसित मुलुकले पनि कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन । यो एक्कासी आएको महामारी भए पनि सरकारले एकदमै दूरदर्शी ढंगले काम गरेको हो । सरकारले समयमै लकडाउन नगरेको भए नेपालको अवस्था झन् नाजुक हुन्थ्यो ।
लकडाउन त ग¥यो तर जब संक्रमण फैलिएपछि चाहीं खुकुलो गरिदियो नि ?
लकडाउन खुकुलो नगर्दा पनि काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने मज्दूरलगायत जनतामा समस्या भयो । अनि सरकारले जनताको मार बुझेर लकडाउन खुकुलो ग¥यो । फेरि जनताले पनि यो समस्यालाई एकदमै सामान्य रुपले बुझ्न थाले त्यसले गर्दा पनि समस्या थपिएको हो ।
सरकारले त जनताको सुविधाभन्दा पनि कर उठाउनको लागि लकडाउन खुकुलो गरेको भन्ने गुनासो छ नि ?
कर असुल्नको लागि मात्रै लकडाउन खुकुलो गरेको त हुँदैहोइन । तर, सरकारसँगै नागरिकहरु पनि सचेत भइदिएको भए असारसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा कोभिडको समस्या यस्तरी फैलिन थिएन ।
नागरिककै असावधानीका कारण समस्या आएको हो त ?
अहिले नागरिकहरुमा पनि यो सरकारको मात्रै समस्या होइन । हामी आफैले सावधानी अपनाउनुपर्छ । अनि मात्रै यो रोगबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने चेतना जनतामा पनि भइसकेको छ । फेरि कामै नगरिकन कोभिड भनेर बस्नुपनि भएन ।
अब लकडाउन गर्दा पनि ‘लौ सरकारले थुनेर राख्यो, जनतालाई काम गरी खान दिएन’ भन्ने । फेरि खुल्ला गर्दा पनि ‘सबै खुल्ला गरेर जनताको जीवनमाथि खेलबाड ग¥यो’ भन्ने आरोप आइरहेको छ । यो चाहीं बच्चालाई आमाले बढी खान दियो भने पनि अपच भयो भन्ने कम दिँदा खानै दिइनन् भनेर अपजस दिने प्रवृत्ति जस्तो ।
तर, सरकार कोभिड नियन्त्रणको लागि पहिलादेखि जिम्मेवार ढंगले लागिरहेको छ । पहिला सरकारले गरेका निर्णय एकदमै प्रभावकारी थियो । अहिले आएर कोभिड–कोभिड भनेर बस्दा जनताको दैनिक जीवन यापन चौपट भयो भनेर खुकुलो ग¥यो ।
त्यसलाई अहिले नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्म परेको छ । तर, काम पनि गरौं, कोभिड नियन्त्रण पनि गर्दै जाऊँ भन्ने सरकारको निर्णय चाहीं सराहनीय छ ।
दशैंको बेलामा लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला छ नि त्यसो गर्दा उचित होला ?
यसमा म चाहीं नागरिकहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले पनि कति कन्ट्रोल गरोस् । यसलाई सरकारको प्रयासले मात्रै कन्ट्रोल गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसको लागि नागरिकहरु आफैले सचेत हुनुपर्छ ।
दशैं अर्को वर्ष पनि आउँछ । अहिलेको समस्या भनेका रोगबाट बच्नु हो । त्यसैले काठमाडौंलगायत बाहिर भएका त्यही बसेर रमाऔं । गाउँघरमा भएकाहरु त्यही बसेर रमाऔं । अहिले चाहीं जहाँ जुन अवस्थामा छौं त्यही बसेर रमाऔं । अर्को वर्ष रोग नियन्त्रण भइसकेपछि सबैजना भेटघाट गरेर रमाओला भनेर सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
त्यसोभए तपाईं फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो ?
जनताको जीवनभन्दा ठूलो कुरा अरु होइन । त्यसकारण यो दशैंको निहुँमा हुने भिडभाड रोक्न र संक्रमण नियन्त्रणका लागि केही समय लकडाउन गरिदिए हुन्छ, भन्न चाहन्छु ।
फलेवास नगरपालिकामा कतिवटा वडा छन् ?
हाम्रो नगरपालिकामा ११ वटा वडा छन् ।
ती सबै वडामा यातायातको सुविधा छ ?
हाम्रो वडामा गाडी पुगेको छ ।
त्यसोभए विकास निर्माणले छलाङ्गै मारेको छ हो ?
हाम्रो नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासले त छलाङ्गै मारेको छ । बाटोघाटोलगायत अन्य विकासमा पनि हामीहरु धेरै अगाडि छौं । हाम्रो साधन, स्रोतले भ्याएसम्म विकास निर्माणका काममा कुनै कसर राखेका छैनौ ।
दुर्गम गाउँमाहरुमा खानेपानी, मोटर बाटो र स्कुलको व्यवस्था कस्तो छ ?
पहाडी बस्ती भएकाले खानेपानीको समस्याबारे गुनासाहरु आउँछन् । त्यसको परिपूर्तिका लागि वृहत खानेपानी योजना ल्याएका छौं । त्यो लगभग मेकप भइसकेको छ ।
अलिकति समस्या वडा नं. ३ र ९ मा थोरै खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । अरु ठाउँमा खानेपानी, स्कुल र मोटरबाटोको राम्रो व्यवस्था भइसकेको छ । बरु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अस्पतालको राम्रो व्यवस्थापन भएको छैन ।
लकडाउनको निहुँमा विकास निर्माणका काम त ठप्प भए नि ?
विकास निर्माणका काम त अहिले सबै रोकिएका छन् । अगाडि पनि मैले भनेकी थिएँ । एउटा ३६ करोडको योजनामा बाटो पिच गर्दै थियौं । कोरोनाको डरले कामदारहरु पठाइयो । पछि ल्याउन एकदमै गाह्रो भयो ।
ग्रामीण महिलाहरुको लागि कस्तो योजना तय गर्नुभएको छ ?
त्यसको लागि हामीले बजेट बिनियोजन गर्दा नै एक वर्डा र एक महिला उद्यम कार्यक्रम तय गरेका छौं । एक त हाम्रो नगरपालिकामा धेरै बजेट पनि हुँदैन । नगरपालिका भएपनि गाउँस्तरको भएकाले आन्तरिक आयस्रोत पनि धेरै छैन ।
त्यसबाट एउटा वडामा कम्तिमा १० जनासम्मले उद्यम गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई लगानी गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएका छौं । तीनवटा वडाका महिलाहरुले त सुरु पनि गरिसक्नुभएको छ ।
दलितहरुलाई कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?
उहाँहरुलाई आरन सुधार कार्यक्रम ल्याएका छौं । ती समुदायका व्यवसाय अनुसार सीपमुलक कार्यक्रमको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा पनि एक वार्ड एक आरन सुधार कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएका छांै ।
महिला जनप्रतिनिधिको ठूलो जिम्मेवारी छ, घर व्यवहार कसरी मेनेज गर्नुहुन्छ ?
राजनीति भनेको समाजसेवा काम हो । त्यसकारण घरव्यवहार र समाजसेवालाई सँगै लिएर मेनेज गर्नुपर्छ । राजनीति गर्ने भएपछि एक, दुई कुरा छोड्नुपर्छ त्यसको लागि घरको व्यवस्थापन छोडेर पनि हिड्नुपर्छ ।
यहाँ न्यायिक समतिको संयोजक हुनुहुन्छ, कस्ता खालका मुद्दाहरु आउँछन् ?
हामीकोमा घरमा श्रीमती छोडेर श्रीमान् विदेश जाने । कमाएको पैसा श्रीमतीलाई पठाउने । तर, यहाँ आउँदा पैसा र श्रीमती दुवै नहुने समस्याहरु धेरै आउँछन् । पछिल्लो समय यस्तो बढ्दै गएको छ ।
सामाजिक सञ्जालले त्यो समस्या बढेको हो ?
सामाजिक सञ्जालले नै त्यस्तो निम्त्याएको भनि नहालौं । कतिपय कुरामा यसले हामी सहयोग पनि गरेको छ । सबै नराम्रा कुराहरु मात्रै छैनन् । राम्रा कुरा पनि छन् । तर, राम्राभन्दा विकृत कुराहरु हेर्ने बानी बढी भयो ।
विकृत कुरा बढी हेर्ने भएकाले समाज उछृंखल हुँदैगयो भन्ने छ नि ?
अहिले सबै कुरा फेस बुक नै हो । त्यसमा आएका कुरा सबै ठीक हुन् भन्ने चाहीं भएको छ । यसलाई कन्ट्रोल गर्नेभन्दा पनि चलाउनेले कुन सही कुन गलत भनेर छुट्ट्याउनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमले विदेसिएका युवाहरुको घर बिग्रिएका कति मुद्दा आए ?
त्यस्ता खालका मुद्दाहरु ५, ६ वटा आइसकेका छन् । अरु पनि थपिँदैछन्, यसबाट समस्याहरु छन् । महिलाहरुले फोनमा कुरा गरेका हुन्छन् । त्यसलाई राम्रोसँग लक गरेर राखेका हुँदैनन् चार्जमा राखेका हुन्छन् ।
त्यहाँ के कुरा भएको छ, लभ चाहीं गरेको हुँदैन । तर, त्यो रेकर्ड पनि भइरहेको हुन्छ । त्यसलाई आफ्ना देवर, जेठाजु, भतिजाहरुले श्रीमानलाई भनिदिन्छन् । त्यसबाट कुरा बिग्रँदै गएर समस्या आएको छ ।
महिला हिंसाका घटनाहरु कत्तिका आउँछन् ?
त्यस्ता घटनाहरु पनि आउँछन् । कपियको सासु, ससुरा, श्रीमानलगायतले विभिन्न निहुँमा घरेलु हिंसा भएका घटनाहरु धेरै छन् ।
राज्यले कानुन ल्याइसकेपछि बहुविवाहको समस्या छ कि छैन ?
देखिने गरी बहुविवाह गरेको समस्या चाहीं आउँदैनन् । तर, आधिकारिक रुपमा विवाह नगर्ने । केटी ल्याएर बाहिर राख्ने । बरु त्यसबाट अवैध बच्चा जन्माउने । जेठीको आँखा छलेर सम्पित्ति दिने जस्ता समस्या चाहीं एकदमै बढेको छ । यो कानुन आएपछि झन् घरकीलाई नहेर्ने बाहिर केटी राखेर पुरै ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्ने समस्या एकदमै बढेको छ ।
त्यसोभए आधिकारिक विवाह नगरी ‘लिभिङ टुगेदर’को समस्या बढ्यो ?
त्यस्तो समस्या एकदमै धेरै देखिएको छ । अस्ति मात्रै हाम्रोमा त्यस्तो समस्या आएको थियो । विवाह गरेको नदेखाएपछि जेठी कानुनी रुपमा जान पनि मिलेन । सम्पत्ति चाहीं खुरुखुरु कान्छीको नाममा पास गरिदिने समस्या छ । त्यसलाई हामीले पनि खोजेर हिड्ने कुरा भएन ।
अन्त्यमा केन्द्रविन्दुमा रहेको लोकप्रिय online मार्फत् फलेवास नगरपालिकाको गतिविधि र मेरा विचारहरु प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै, नजिकिएको वडादशैको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
२०७७ कार्तिक ४, १२: ००: २०